Burcad Dhac iyo Kufsi ka billaabay Xaafado ka tirsan Magaalada Muqdisho
Xaafado ka tirsan Degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya Burcad Habeenkii Guryaha ugu soo gashay iyadoo farsamo gaar ah Isticmaalaya.
Mid ka mid ah dadka ku dhaqan Xaafadda Shiirkole ee degmada Hodan ayaa sheegay in Burcaddaan oo sida uu sheegay Hubeysan ay raxan raxan u soo weeraraan Guryahooda iyagoo iska dhigayo Cidamada Ammaanka dowladda Soomaaliya xilli aanu jirin wax dares iyo Aqoonsiyo lagu garan karo.
Dhinaca kale qof kale oo deegaanka ah ayaa isna sheegay in marka laga soo dhaca Baahsan ee ay geystaan raggaasi ay jiraan falal kufsi oo ay kula kaceen Dumar ka mid ah dadka degan Xaafadaha Burcaddaasi ay ka dillaaceen.
Dhibanayaashaasi ka cabanaya Dhibaatooyinka kala soo gudboonaaday Burcaddaasi ayaa sidoo kale sheegay in Cabsi aawgeed xafadahaasi qaarkood laga barakacay maadaama sida ay sheegeen xiriiro ay la sameeyeen Hay’adaha Ammaanka iyo maamulka degmada Hodan aanu jirin wax laga qabtay Cabashadooda.
Si kastaba tani ayaa waji gabax ku ah Hay’adaha ammaanka gaar ahaan maamulka degmada Hodan iyo Saraakiisha Ammaanka degmadaasi maadaama iyadoo la isku muujinayo Ciidamada dowladda la dhibaateynayo dad shacab ah islamarkaana aanu jirin wax tallaabo ah oo ay uga hortagayaan arrimahaasi.